ခွင့်ပြု ချက် မရှိ ဘဲ လမ်းတွေ ပိတ်တဲ့ လူတွေ ကို ပြတ်ပြတ် သား သား ပြောလိုက် တဲ့ အဆို တော် ပိုပို – Shwe Ba
ပိုပို ဟာ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီးဖြစ်တဲ့ ချစ်ဖူးခဲ့ သမျှ တစ်ကိုယ် တော် အယ်လ် ဘမ် ၊ အလွမ်း သီချင်း ကြိုက် တဲ့ ရေဒီယို အယ်လ် ဘမ် တို့ကို ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ Master Piece မီနီအယ်လ်ဘမ်လည်း ထွက်ရှိထားပါတယ်။သူမက ဂီတပိုင်းမှာသာမက ဇာတ်ကားရိုက် ကူးမှု တွေလည်း လုပ်လာသူပါ။ ဂီတလောကမှာလည်း ပရိသတ်အခိုင်အမာ နဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိနေတဲ့ လူငယ်အဆိုတော် တစ်ယောက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ် ရဲ့ ဒုတိယ လှိုင်း ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ကို ရိုက်ခတ်မှုပြင်းထန်နေပြီဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်အတွင်းမှာ လမ်းပိတ်ဆို့မှု တွေပြုလုပ်ကာ Semi Lockdown အဖြစ်ကြေငြာထားတာပါ ပိုပိုကတော့ ဒီလို Semi Lockdown ပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်ကွက်တချို့က လမ်းအသေပိတ်ဆို့မှုတွေ ပါ ပြုလုပ် နေတဲ့အပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသားပြောဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်“COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အစိုးရက အိမ် အပြင် မထွက်ဖို့ ပဲ မှာထားတာကို လမ်းတွေမှာ သံပြားတွေ နဲ့ အတင်း ပိတ်စို့ထားတာတွေ တွေ့လာရတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း လမ်းတစ်ဝက်ပိတ်ပြီး စစ်ဆေး မေးမြန်းတာ ကိုတော့ လက်ခံပေမယ့် အကုန် ပိတ်လိုက်တာကိုတော့ မကြိုက်ဘူး။ လူတွေမှာ စားဖို့၊ သောက်ဖို့၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုသေး တယ်” လို့ ပြောလာခဲ့တာပါ။
အစိုးရက လုပ်ခိုင်းတာက Stay At Home လုပ်ဖို့ လောက်ပဲလေ တစ်ခြမ်းဖွင့်ပြီးတခြမ်းပိတ်ထားရင် ရပြီထင်တယ် ဒီနေ့ Facebook မှာ တက်လာ တာကြည့်ရတာ လူကခုန်ပြီးတော့ ထွက်လာရတယ်ဆိုတော့ အဲ့လောက်ကြီးတော့လုပ်စရာနလိုဘူးထင်တယ် အဲ့လောက်ကြီးလုပ်ဖို့ လည်း ညွှန်ကြားထားတာမရှိဘူးလေ အဲ့ဒါမျိုးတော့မကြိုက်ဘူး” လို့ ပိုပိုက ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလာခဲ့တာပါနော်ယနေ့မှာတော့ ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီက ဒီလို ပိတ်ဆို့မှုတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ ဆက်လက်ပိတ်ဆို့နေမည်ဆိုပါက တရားဥပဒေအရအရေးယူမယ် လို့ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပိုပို ဟာ ပထမဆုံး တဈကိုယျတျေျာ တေးစီးရီးဖွဈတဲ့ ခဈြဖူးခဲ့ သမြှ တဈကိုယျ တျေျာ အယျလျ ဘမျ ၊ အလှမျး သီခငျြး ကွိုကျ တဲ့ ရဒေီယို အယျလျ ဘမျ တို့ကို ထှကျရှိခဲ့ပွီးတော့ Master Piece မီနီအယျလျဘမျလညျး ထှကျရှိထားပါတယျ။သူမက ဂီတပိုငျးမှာသာမက ဇာတျကားရိုကျ ကူးမှု တှလေညျး လုပျလာသူပါ။ ဂီတလောကမှာလညျး ပရိသတျအခိုငျအမာ နဲ့ အောငျမွငျမှု ရရှိနတေဲ့ လူငယျအဆိုတျော တဈယောကျ လညျးဖွဈပါတယျ။
ကိုဗဈ ရဲ့ ဒုတိယ လှိုငျး ကတော့ ရနျကုနျတိုငျး ကို ရိုကျခတျမှုပွငျးထနျနပွေီဖွဈပွီး ရပျကှကျအတှငျးမှာ လမျးပိတျဆို့မှု တှပွေုလုပျကာ Semi Lockdown အဖွဈကွငွောထားတာပါ ပိုပိုကတော့ ဒီလို Semi Lockdown ပွုလုပျခွငျးကို ရပျကှကျတခြို့က လမျးအသပေိတျဆို့မှုတှေ ပါ ပွုလုပျ နတေဲ့အပျေါ ပွတျပွတျသားသားပွောဆိုလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ“COVID-19 ဖွဈပှားမှုကွောငျ့ အစိုးရက အိမျ အပွငျ မထှကျဖို့ ပဲ မှာထားတာကို လမျးတှမှော သံပွားတှေ နဲ့ အတငျး ပိတျစို့ထားတာတှေ တှလေ့ာရတယျ။ ပုံမှနျအတိုငျး လမျးတဈဝကျပိတျပွီး စဈဆေး မေးမွနျးတာ ကိုတော့ လကျခံပမေယျ့ အကုနျ ပိတျလိုကျတာကိုတော့ မကွိုကျဘူး။ လူတှမှော စားဖို့၊ သောကျဖို့၊ အလုပျလုပျဖို့ လိုသေး တယျ” လို့ ပွောလာခဲ့တာပါ
အစိုးရက လုပျခိုငျးတာက Stay At Home လုပျဖို့ လောကျပဲလေ တဈခွမျးဖှငျ့ပွီးတခွမျးပိတျထားရငျ ရပွီထငျတယျ ဒီနေ့ Facebook မှာ တကျလာ တာကွညျ့ရတာ လူကခုနျပွီးတော့ ထှကျလာရတယျဆိုတော့ အဲ့လောကျကွီးတော့လုပျစရာနလိုဘူးထငျတယျ အဲ့လောကျကွီးလုပျဖို့ လညျး ညှနျကွားထားတာမရှိဘူးလေ အဲ့ဒါမြိုးတော့မကွိုကျဘူး” လို့ ပိုပိုက ပွတျပွတျသားသားပွောလာခဲ့တာပါနျောယနမှေ့ာတော့ ကိုဗဈျ ထိနျးခြုပျရေး ဗဟိုကျောမတီက ဒီလို ပိတျဆို့မှုတှမေပွုလုပျဖို့နဲ့ ဆကျလကျပိတျဆို့နမေညျဆိုပါက တရားဥပဒအေရအရေးယူမယျ လို့ ညှနျကွားခကျြ ထုတျပွနျခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….
ရထားပေါ်မှာလည်း Mask မတတ်ပဲ တ တွဲမှ တတွဲ လျှောက်သွားနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၃ ဦးကို ရထားဖြင့် ပြည်ဘူတာမှ ရန်ကုန်သို့ပြန်ပို့
ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့မှ စ၍ အစိုးရဝန်ထမ်းများအားလုံး မူလအင်အားအတိုင်း ရုံးပြန်တက်ရမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်